Hadda waxaad kala soo bixi kartaa in ka badan 250 buug oo farshaxan ah Madxafka Virtual Getty | Abuurista khadka tooska ah
La isku xidhka shabakadaha ayaa ah ilo dhaqaale oo aan la koobi karin hadaad taqaanid sida loo raadiyo. Dhab ahaantii dhibaatada ugu weyn ee helitaanka ilo tayo sare leh ayaa ah ogaanshaha sida loo helo oo looga takhaluso tiro kale oo xiriir ah oo noo horseedi doonta nuxur aan ahayn wax la filayo in loo isticmaalo shaqooyinka webka ama shaqada lafteeda.
Matxafka 'Getty Museum' waa mid ka mid ah ilaha aan tagi karno marka aan u baahanno helitaan dhiirrigelin ah ama sawir aan u adeegsanno asal ahaan websaydhka sawir qaadista Matxafkan, marka laga reebo kumanaan sawir oo ay ka dhigeyso mid la heli karo qof kasta, wuxuu hadda ka sameeyay in ka badan 250 buugaag farshaxan ah oo bilaash lagu heli karo.
Ka socda maktabaddaada daljirka ah, waxaad ka heli kartaa in ka badan 250 buug oo ka dhex muuqda buuggaagta, iyo sidoo kale qoraallo iyo qoraal gacmeedyo ka socda Mac-hadyada Ilaalinta iyo Cilmi-baarista ee Getty. Waxaan ka hadleynaa inaad awood u leedahay inaad gasho daraasadaha midab-biyoodka Cézzane ama dhowrista goobaha qadiimiga ah ee Badda Dhexe.
Sidaas darteed haddii aad tahay qof jecel farshaxanka, maktabaddan maktabadda ahi waa inay ku qanciso dhammaan baaxaddeeda. Marka laga reebo in aad baari karto qoraaga ama ereyada muhiimka ah, waxaad fursad u lahaan doontaa inaad gujiso qaybaha kala duwan, sida farshaxanka Latin America, waxbarashada ama sawir qaadista.
Buugaagta waxaa loo heli karaa ku aqri labadaba qaabka PDF iyo Buugaagta Google. Mid ka mid ah faahfaahinteeda ayaa ah inaad ka heli karto nuqul jireed WorldCat, degel internet ah oo muujinaya kuwaas oo ah maktabadaha u dhow meesha aad ka heli karto buugaas aad raadineysay.
Waxaad marin u heli kartaa maktabadooda dalxiis laga soo xigtay. Hal fursad weyn oo lagu helo dhammaan noocyada buugaagta farshaxanka, marka laga reebo ogaanshaha kumanaan sawir oo ay u diyaariyaan qof kasta; sida waqtiyadii kale aan khadadkaas ula wadaagnay matxafyo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Ka hel in ka badan 250 buugaag farshaxan oo bilaash ah Madxafka 'Getty Museum'
160 saacadood si loo abuuro aragtidan 600 megapixel ee cirka Manhattan
Qalabka casriga ah ee Photoshop CC wuxuu ku ogaadaa walxaha hal guji